I-SocialTV = Ividiyo + Yomphakathi + Iyasebenzisana | Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 15, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ubuchwepheshe bevidiyo buyakhuphuka… kusuka ekubonisweni kwe-retina, kuya ezikrinini ezinkulu, kuya ku-3D, AppleTV, Google TV… abantu babelana futhi badla amavolumu amakhulu kunawo wonke emlandweni. Okungezwe kubunzima yi isikrini sesibili - Ukusebenzisana nethebhulethi noma idivayisi yeselula ngenkathi ubuka ithelevishini. Lokhu ukufika kweSocialTV.
Ngenkathi ukubukwa kwethelevishini yendabuko kwehla, iSocialTV ikhombisa izethembiso eziningi. ISocialTV iyanda ukubukwa, isiza ukukhushulwa ngisho nokushayela ukuthengisa okuqondile. Amathuba awapheli ngeSocialTV futhi izinhlelo ziyaqhubeka ukwethula ngesivinini esikhulu. Iziteshi zethelevishini zendabuko azihlali phansi ngenkathi imali engenayo idlulela eziteshini eziku-inthanethi, iSocialTV inikeza ithuba lokugcina imali ikhule.
Ezinye izinkampani nobuchwepheshe bazo esikhaleni seSocialTV:
indiza - Finyelela iziteshi zakho zangaphezulu zomoya - wonke amanethiwekhi amakhulu okusakaza nezinye iziteshi ezingaphezu kwezingu-20 - ngekhwalithi ye-HD.
I-Boxee - iletha ngokuzenzakalela izincomo zevidiyo ezivela kubangani bakho ku-Facebook naku-Twitter ku-TV yakho futhi ikuvumela ukuthi wabelane ngezinto nabo ngokuchofoza kwerimothi.
I-Boxfish - i-boxfish ithwebula wonke amagama akhulunywa kuthelevishini, njengoba kwenzeka. Bacubungula idatha ngesikhathi sangempela futhi siyisebenzisa njengengqimba entsha yokutholwa kwe-TV besebenzisa ithebhulethi (okwamanje uhlelo lokusebenza lwe-iPad).
I-ConnecTV - ihlanganisa ukuxhumana nomphakathi okuhola phambili, izici ezihlukile zomphakathi, nokuqukethwe okwenzelwe okwezifiso okuvumela abasebenzisi ukuthi baxoxe nabanye ababukeli ngenkathi bebukele imibukiso yakho oyithandayo.
I-GetGlue - njengoba i-Foursquare ikuvumela ukuthi ungene ezindaweni, i-GetGlue ikuvumela ukuthi wakhe inethiwekhi yokuxhumana nabantu futhi uhlole izinhlelo zethelevishini, ama-movie, nomculo.
I-Google TV - Thola izinto ezinhle ongazibuka ukuthi ngabe ziku-TV ebukhoma noma iwebhu, ngokufinyelela okusheshayo nezincomo ezenziwe zaba ngezakho kuyo yonke imithombo yokuqukethwe.
Ikhithi yedijithali - inika amandla ukuguqulwa kokusakazwa kwendabuko kuthelevishini ye-multiscreen broadband, bukhoma noma ngokufuna izixazululo zevidiyo.
Miso - ukwakha isipiliyoni sesikrini esikhethiwe kanye neplatifomu entsha yokudala.
Rovi - inika amandla ukulawula kwenqubo yokuqukethwe kusukela ekudalweni kuya ekusatshalalisweni — futhi ihambisa imidiya yakho yedijithali ngqo kubathengi lapho beyifuna, kuzingxenyekazi eziningi nakumadivayisi.
SnappyTV - ipulatifomu elula ukuyisebenzisa, enamandla eyenza imifudlana ebukhoma nokusakazwa kwe-TV kwezenhlalo, iselula negciwane.
I-TVcheck - okwamanje ise-UK, i-TVcheck iyindlela yamahhala, emnandi futhi elula yokwabelana ngothando lwakho lwe-TV, ukuzuza imiklomelo nokuhlangana nabangane - ngaphandle kokuphazamisa ukubuka kwakho.
I-WiOffer - Thola ama-WiOffers wethelevishini kanye nawomsakazo okukhethekile ku-smart phone noma kuthebhulethi yakho.
I-Xbox LIVE - I-TV yakho iguqulwa ibe yisipiliyoni sokuzijabulisa esixhunyiwe nge-Xbox LIVE. Dlala imidlalo yeKinect neyesilawuli nabangane abakwi-inthanethi noma ngabe ukuphi noma ubuke ngokushesha ama-movie we-HD, imibukiso ye-TV nezemidlalo.
YapTV - yabelana ngokubuka kwakho ithelevishini ku-Twitter naku-Facebook.
Nawe - I-Youtoo iyinethiwekhi yomphakathi kanye nenethiwekhi yethelevishini enobuchwepheshe obuphambili obenza basebenze ndawonye.
Itheknoloji eyodwa ethokozisayo yezikrini zesibili ezivivinywayo njengamanje isigxivizo somunwe somsindo. Ngenkathi ubuka ithelevishini ngedivayisi ephathekayo noma yethebhulethi, uhlelo lokusebenza luyagijima futhi iminwe yeminwe umbukiso wethelevishini, i-movie noma ukudlala kwezebhizinisi futhi kukhiqiza ngokuzenzakalela okwenziwayo kusikrini sakho sesibili.
Tags: isibhakelai-boxfishumabhebhanakholwaniikhijithaliAmavidiyo Wokumakethamisoumabhebhanaithelevishini yomphakathiezokuxhumanaithelevishinixbox bukhomanawe